बट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता यस्ता रोगको लागि अचुक ओखती हो बट्टाईको अण्डा – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीबट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता यस्ता रोगको लागि अचुक ओखती हो बट्टाईको अण्डा
February 8, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 7764
November 19, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 11831
से’ क्स टो’यको बजार १५ अर्ब डलर बराबर पुगेकोे छ। युवामाझ लोकप्रिय रहेकाले यसको बजार बढेको हो। टो’यको प्रयोग बढ्नुमा कोरोना महामारीका कारण एक्लिएका युवाकोे बाध्यता हो वा चिनियाँ समाज साँच्चिकै बदलिएको हो त? घरमा
January 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6387
November 29, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10985
LEX 18 agenda conversation: Job club (412322)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (386733)